AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA : Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona
Ombivavy bevohoka nangalarina tany Bealoy, araka ny fanazavan’ny sefo sektera no hitan’ny fokonolona faty tany Andohagara ao amin’ny fokontany Ampitolova, kaominina Belobaka iny. 20 janvier 2019
Tamin’ny enina sy sasany maraina ny zoma teo no nisy nampilaza ny sefo sektera fa misy fatin’omby hita ao amin’ity sektera Andetsy ity, fa tsy hita intsony ny mpangalatra. Nampilaza ny mpitandro filaminana sy ny sefo fokontany ny sefo sektera. Novo noin’ireo olon-dratsy ilay omby, nisy ampahany nalainy saingy ny ankamaroany, toy ny feny iray, ny tapany ambony rehetra miaraka amin’ny lohany, ny taovany dia mbola hita teny an-toerana daholo.
Mangataka fiaraha-miasa amin’ny fokonolona ny zandary hanome vaovao mikasika ity halatra ity. Manentana ny fokonolona hatrany hanome vaovao azy ireo ny zandary ary manome toky fa mipetraka ho tsiambaratelo ny fanomezam-baovao rehetra. Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ity heloka ity satria dia raran’ny lalàna ny halatra omby fa mbola raran’ny lalàna ihany koa ny famonoana omby vavy.